Otú na-ekiri ihe nkiri na iPhone
> Resource> iPhone> Olee Otú M Pụrụ Watch Movies On iPhone
Ị na-eme atụmatụ na-ekiri ụfọdụ ihe nkiri egwuregwu na ị na Agbaghara n'oge ememe? Ì bu n'obi na-eme ụfọdụ ịchụkwudo na gị iPhone ma na-echegbu onwe nke video faịlụ Ọkpụkpọ na a ga-akwado site na ngwaọrụ gị? Echegbula onwe gị, m ebe a iji nye aka.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ibudata ọzọ videos gị 'na-eche nche' ndepụta, ị nwekwara ike eme na na mgbe ahụ mpikota onu ma ọ bụ tọghata ndị video faịlụ maka playback na gị iPhone. Ruru ka esika na ndikpan ndepụta nke na-akwado video formats maka iPhone, ị ga mkpa iji tọghata faịlụ (ie VOB, MKV, RMVB, MTS na wdg) na-outwith na-akwado ndepụta tupu ị pụrụ n'ezie na-ekiri ya na gị na iPhone . Otu na-aga n'ihi na vidiyo na-echekwara na ala Apple si faịlụ Ọkpụkpọ ma na kedi codecs.
Lelee otú ị pụrụ ime otú ndị na-eji depụtara dị ka Method 1: Site online video Ntụgharị ma ọ bụ; Method 2: Desktọpụ Ntụgharị.
Usoro 1: Online Video Ntụgharị
Ị nwere ike iji free online video Ntụgharị n'okpuru. Ị nwere ike mfe tọghata video faịlụ na-adịghị gị na-akwado iPhone. Usoro nke iji ihe na online video Ntụgharị bụ kama n'ụzọ kwụ ọtọ.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ndị ọzọ free online video converters, dị nnọọ inwe ya ebe a, ndepụta nke online video converters
E nweghị download ma ọ bụ nwụnye chọrọ; nnọọ na ị ga bulite gị faịlụ, setịpụrụ mmepụta formats, na mgbe ahụ na-amalite na converte. Ụfọdụ n'ime ihe ndọghachi azụ-agụnye ọsọ nke gị akakabarede ma ọ bụ download nke bụ kpamkpam dabere na gị njikọ Ịntanetị nakwa dị ka ole na mmepụta faịlụ Ọkpụkpọ. Ọ bụrụ na ị mkpa inwe ike ime ihe na gị videos, nwalee a desktọọpụ Ntụgharị kama.
A na desktọọpụ Ntụgharị nwere ike ada ọzọ nke a ịrụsi ọrụ ike ma ọ bụrụ na ị gbalịrị otu n'ihu. Otú ọ dị, sleek ma onye ọrụ-enyi na enyi interface nke Wondershare Video Ntụgharị Ultimate maka Mac ga-enwe ike na-enye gị video ọzọ feasibility. Ị nwere ike ịhọrọ ma tọghata gị video faịlụ na batches ozugbo ma ọ bụ dezie ha n'ihu playback nakwa dị ka ibudata mmasịrị gị kwụsịrị gụgharia na saịtị na nyere nhọrọ na-esure ha n'ime a DVD dị ka a collection.
E nweghị Mmebi ka ikpe mbipute na ọ bụ kwekọkwara maka Windows PC. Ndị ọzọ karịa inwe ike nabata nnukwu n'usoro nke mmepụta formats, ọ pụkwara tọghata gị faịlụ ruo 30X ngwa ngwa na ZERO àgwà ọnwụ. Gaa n'ihu n'okpuru maka ọzọ nduzi na otú ị pụrụ n'ezie arụ ọrụ si ụfọdụ n'ime ọtụtụ atụmatụ wuru na-na na Wondershare Video Converter Ultimate.
Direct mkpakọ ma ọ bụ akakabarede
Ikpuru-na-dobe video faịlụ jidesie Ntụgharị
Họrọ mmepụta format si Videos (ma ọ bụrụ na unu maara kpọmkwem faịlụ ụdị gị mkpa) ma ọ bụ Devices (presets dabeere na ika na nlereanya nke ngwaọrụ)
Pịa na tọghata (na ala-nri akuku nke interface)
Dezie tupu ekiri
Pịa na Dezie akara ngosi (dezie gị videos)
Ọkụ videos n'ime a DVD
Ịnyagharịa ka ọkụ 's taabụ (n'elu nke interface)
Pịa na Dezie akara ngosi (dezie gị videos bụrụ na ị chọrọ)
Họrọ DVD menu ma ọ bụ template
Họrọ Ọkụ n'ihu na ịpị na edinam button (na ala-nri nke interface)